AbakwaBushiri bachithe ubusuku ezitokisini zase-Malawi | Scrolla Izindaba
AbakwaBushiri bachithe ubusuku ezitokisini zase-Malawi
UMphrofethi uBushiri obalekile kanye nonkosikazi wakhe uMary bachithe ubusuku esitokisini samaphoyisa sase-Malawi ngemuva kokuzinikela emaphoyiseni enhlokodolobha, i-Lilongwe.
AbakwaBushiri bakhiphe isitatimende ekuseni ngoLwesithathu bethi bazinikele “ukuzochaza ngokusemthethweni futhi bavikele izinqumo abazithathile zokuza e-Malawi.”
Selokhu bafaka isicelo sebheyili, kodwa basaboshiwe okungenani namhlanje ebusuku.
Kuhlala kuyindida ukuthi indoda ecebe kakhulu yase-Malawi nenkosikazi yayo bayithola kanjani ibheyili eNingizimu Afrika babalekela e-Malawi. Lezi zithandani zibhekene namacala okushushumbisa imali nokukhwabanisa.
UMengameli uCyril Ramaphosa uthi lesi senzo siyaphoxa futhi uthe “Ngiyalele amaqembu athintekayo ukuthi anginike umbiko oningiliziwe ngalesi senzo kungakapheli amahora angama-48”.
Ekhuluma nabakwa-Scrolla.Africa wase-Lilongwe, uNgqongqoshe Wezokwazisa uGospel Kazako uthe abakwaBushiri “bazovela enkantolo e-Lilongwe kusasa (ngoLwesine) lapho kuzolalelwa khona kwebheyili yabo.”
UKazako uthe uhulumeni wakhe uzolandela inqubo yezomthetho uma inkantolo ithatha isinqumo sokubabuyisa.
UKazako usalokhu ebambile ukuthi abakwaBushiri bafike kanjani e-Lilongwe bethi kusaphenywa. “Sizoyikhipha leyo mininingwane ngokushesha uma sesiyitholile. Akukho, nganoma iyiphi indlela, ebhizinisini lokufihla okuthile emphakathini.”
AbakwaBushiri akubona kuphela abantu abadumile abaphume bangena ngokungemthetho eNingizimu Afrika.
• UGrace Mugabe – Ugcine ukubonwa kowezi-2017. Owayengunkosikazi kaMengameli wase-Zimbabwe ubhekene necala lokushaya. Kunencwadi egunyaza ukuboshwa kwakhe
• UOmar Hassan Ahmad al-Bashir – Ugcine ukubonwa ngoNhlangulana kowezi-2015. Ubekwe amacala okubulala nokuhlukumeza
• AbakwaGupta – bagcina ukubonwa ngonyaka wezi-2018. AbakwaGupta babhekene namacala enkohlakalo ahlobene nokulawulwa kombuso
• USamantha Lewthwaite – obizwa ngokuthi “Umfelokazi Omhlophe”. Wagcina ukubonwa kowezi-2011. Wabekwa icala lokwakha uzungu nokuphatha iziqhumane
Abantu baseNingizimu Afrika abeqe izwe futhi abafunwa uhulumeni waseNingizimu Afrika ukuzobhekana nomthetho:
• UBarry Tannenbaum – Wagcina ukubonwa kowezi-2007. Uthweswe icala lenkohliso mayelana nama-ARV
• UGerhard Jansen – ufunelwa ukubulala. Wabalekele e-Brazil. Ubuyiselwe eNingizimu Afrika nyaka ngemuva kweminyaka eyisishiyagalolunye abaleka.